Umhlahlandlela we-Nightlife wezindawo zokudlela ezinhle kunazo zonke eSan Juan
I-Caribbean E-Puerto Rico
by I-Zain Deane
Izinto ezintathu zifakazela ukuthandwa kwezingubo zePuerto Rico . Owokuqala ubukhona (ungasho ukuthi awukho omnipresence) wesiphuzo sesizwe, i-rum. Le mikhiqizo emibili ye-rum lapha yiBacdidi eyaziwayo emhlabeni wonke kanye noDon Q.
Okwesibili, iminyaka yokuphuza ngokomthetho lapha 18. Futhi ekugcineni, abantu abakulesi siqhingi bathanda ukuphuza. Hlanganisa konke lokho ndawonye, ​​gubha kanye, futhi ube nombono wendawo yokukhala. Nazi ezinye izintandokazi.
Lokhu ukukopela kancane ngoba lokhu akuyona ibha, kodwa kunalokho isiko sokuphela kwesonto. NgoLwesine noLwesihlanu ebusuku, izakhamuzi zigcwalisa isikhala semakethe, noma i- Plaza del Mercado e-Santurce, eguqula ibe yiqembu elivulekile. Ngaphezu kwemishayo eminingi yendawo, i-plaza inezinhlobo eziningana zokudla, noma ukudla okuncane okukhethekile kakhulu ePaul Rican. I-Placita , njengoba ibizwa, ine-vibe ekhululekile, ejabulisayo, futhi nakanjani isendleleni eshayiwe; nakuba ungayikukwazi ukupaka ukupaka okungeke kwenzeke kulo ndawo.
E-Dos Hermanos naseKapitol Streets, Santurce, eSan Juan.
Awukwazi ukushaya indawo: isakhiwo sekoloni esiqongweni segquma ekhoneni likaCristo naseSan Sebastián Street. Awukwazi ukushaya indawo, nokubeka amatafula echibini kwisitezi sesibili kanye nendawo ende yezingxenye ezihlala endaweni emgwaqweni nasePaza San José. Ngaphezu kokukhethekile kweziphuzo zansuku zonke, ungathola ama-burgers ashisayo lapha evela e-El Patio de Sam. Futhi awukwazi ukushaya amahora: I-Nono izohlala ivulekile kuze kufike ezine.
I-San Sebastián Street, Old San Juan
Indlu ye-grunge e-Old San Juan, i-El Batey inesithakazelo esiyingqayizivele kwenye yezitaladi ezidumile kunazo zonke edolobheni. I-collegiate-atmosphere atmosphere, evezwe yi-graffiti, i-jukebox, ama-lampshades ezenziwe ngamakhadi ebhizinisi, kanye nebha lezinkuni elibhekene ne-autographs amaningi (uma engaziwa). Ukufuna ukungazenzisi kungenye yezimfanelo zayo ezikhangayo kakhulu.
101 Cristo Street, Old San Juan
Ngamagatsha amabili, e-Old San Juan nase- Isla Verde , iLupi ingumjovo weSwitzerland Break endaweni yangasese ye-chic. Ukudla yi-Tex-Mex esindayo, iziphuzo ezinkulu (nge-margaritas enhle kakhulu), ne-bar enemibala futhi ehamba ngezimpelasonto (ikakhulukazi igatsha lase-Isla Verde, elinomculo obukhoma ebusuku).
I-Colmado Bar Moreno
I-Colmado Bar Moreno akuyona inkomba engenzeka ukuba enze uhlu lwezingodo eziphezulu; phakathi nosuku, udoti olunokuthula futhi olungenasidingo kanye nesitolo jikelele. Ebusuku, isitolo sisebenzise indawo yaso phambi kwetafula elincane iTetuán Street ukusetha indawo yangaphandle. Phonsa umculo we-reggaetón omncane, iziphuzo ezingcolile-ezishibhile ezikhonjiswe ezinkomishini zepulasitiki, futhi akumangazi ukuthi amakhasimende ahambela ku-counter.
365 Street Tetuán, Old San Juan
Kuzo zonke izindawo zaseCaribbean (naseMexico), uSeoror Frog's uye wathumela izingane zasekolishi zigijima ekhaya zijabule. Ungathembela kulokhu okuhlanganyelwe kwisimo esisha, esinobucayi, umculo okhanyayo, amaqembu aphile, i-karaoke, amantombazane adansa esiteji, nokuphuza utshwala ngokukhululekile. Igatsha lasePuerto Rico laleli ketane lisemuva kweSheraton. I-Señor Frog's iyindawo yokudlela egcwele futhi, kodwa ungadla kwenye yezindawo zokudlela ezinhle zase-Old San Juan bese ufika lapha ukuyogubha.
104 I-Comercio Street, Old San Juan
UDonald Trump Ufuna Ukuthenga Puerto Rico ??
Ukuvakasha kwe-Flamenco ku-Old San Juan
Hlangana nabapheki abaphezulu ngemuva kwezokudlela ezinhle kakhulu zasePuerto Rico
Izindawo ezihamba phambili ze-Fashion Unique eSan Juan
Umlando Wokuqala wasePuerto Rico
Izindawo ezingu-8 ezihamba phambili zokuthenga imikhosi yasePuerto Rican
I-Duluth Gay Pride 2016 - I-Gay Pride engu-Superior 2016
I-Top Public Squares (Piazze) eRome, e-Italy
I-Taos, eNew Mexico, yokuKholwa Komndeni
Izindawo ezimbi kunazo zonke zezokuvakasha eziqhubekayo
I-Hollywood Sign: Izikhombisi, Ukubukeka Okuhle Nezintaba
Indlela Yokubuka I-Fresno Blossom Trail yaseCalifornia
B I-Savannah Hotel ye-Historic: Inani, isitayela, Indawo, nokudla okukhulu
I-Hong Kong Ukubukezwa Kokudlela Kwamahora 24
Izindawo zokudlela eziphezulu eziyishumi eziphezulu ze-Oklahoma City
Ukuya e-Asia ngoNovemba
Izindawo ezingu-12 ezihamba phambili zezindiza emhlabeni
Izidingo zokungeniswa kwe-Central America Ukuhamba
I-Dekalb Farmers Market yakho e-Atlanta
I-Historic Allure of Water Isrmal sika-Ischia